Mayelana ballerina ihlazo Anastasia Volochkova asiyeki amahlebezi engapheli. Omunye wemibuzo adumile ukuphendula ngesikhathi enengxoxo actress - kungani walishiya Bolshoi Theatre? Kukhona inguqulo isizathu Volochkova ukukhula. Lo mlingisi kakhulu efanayo ukholelwa ukuthi ngokungafanele ngayo.
ozakwabo esiteji ngokuvamile waveza ukuthi Volochkova okukhulu kakhulu ukuba ballerina. Yiqiniso, ukuthi kwakusinda kwehlela kuye kukhethwa abalingani. Futhi naphezu kwayo yonke intuthuko, actress kwadingeka balishiye leli Bolshoi Theatre. Kulabo abangamazi ubude Volochkova: 171 cm, isisindo 55 kg. Kunokuba ngokungeza Isithonjana ballerina, kodwa izinto zokuqala kuqala.
Uma kancane Nastya wafika ballet "The Nutcracker". Eshukunyiswe yilokhu akubona, ngokucacile isinqumo ngoba ngokwami ukuthi ngeke ukudansa esiteji. iphupho lakhe lifezekile. Volochkova iziqu honours School Ballet ngahlanganyela Mariinsky Theatre.
Ngokusho ulwazi oluthile, ufika Mariinsky, bese-Grand wasiza uxhumano wakhe kanye nemali abathandi ocebile, kodwa wonke la amahemuhemu umdansi ophika. Ngemva ukuhlala iDemo Big Volochkova Ubamba uchungechunge amahlazo, nokudilizwa kanye nokunciphisa kanye enkantolo.
Ekugcineni, ukukhula Anastasia Volochkova uye bancishwa wakhe yesivumelwano esisha. Ngo-2003, ekugcineni ahlukana ngalo kakhulu, futhi lokho kumangala ziphelile hhayi umusa wakhe. Engafumani ukuthi angamngenisa ukuqonda nobuholi yemidlalo, ngo-2003, Anastasia eyilungu iqembu "United Russia".
Futhi ngo-2004 waba ballerina prima we Krasnodar Ballet Theatre, kukhona isizathu esithile Volochkova ukukhula kwaba hhayi isithiyo ekukhishweni amaqembu ayinhloko. Ngo parallel, yena uqala ukwenza kumafilimu. I-movie wokuqala kuba "indawo ngaphansi kwelanga", bese ziphuma tape iqhaza lakhe "Black Prince" futhi "akazalwanga amahle." Futhi ngo-2005 kukhona umcimbi enkulu emphilweni inkanyezi - ukukhanya livela indodakazi yakhe Ariadne.
Kodwa nakhu ukuphila komuntu abadlali abanamakhono, abadansi kanye nomama doting isikhathi eside ingahambi kahle. Ethusayo ngo-2007 lomshado okukhazimulayo, lapho zamemeza abezindaba, ekugcineni yachitheka. Umyeni igor vdovin waya uxoxe Anastasia ngemva kwesehlukaniso, futhi yena Volochkova ukutshelwa zabo "ubungani engapheli." Ngo-2009, ballerina futhi ngezwi elikhulu uthi ngokwayo, kodwa ngaphezulu ngendlela yokuqala. Yena ngokufaka isicelo iqhaza okhethweni lemeya Sochi. Kodwa ahluleka kudlule ngisho ukubhalisa ngezizathu zokuthi akazange akhombise ubudala babo. Ngesikhathi esifanayo, umculi eshiya ethiyetha qembu Krasnodar - futhi isizathu akusiyo ukukhula Volochkova, a "isifo inkanyezi".
Eminyakeni yamuva, amahlazo bengayeki emhlabeni ukuphila siqu ballerina wangaphambili. Volochkova ngokwayo kuphakamisa ukubukeka kwabo, owendlala inethiwekhi izithombe zabantu abanqunu eholidini. Ngokusho kwakhe, ngakho-ke "uvala oxygen" paparazzi. Nokho, lapho kubonakala sengathi ube usini.
Naphezu kweqiniso lokuthi ukuphila Nasty awahlobene ballet, alunguza ujabule ngempela. nethimba wakhe Abophe isimo nge inoveli entsha, isikulufa ne umculi odumile UNikolai Baskov. Charming blonde, njengoba ngaso sonke isikhathi, usephikile wonke amahemuhemu, etshela ukuthi basks e ukubukwa abantu abaningi.
Indlela ukukhetha futhi ufake itheku amanzi heater ukuba afakaze